ururka SEEYO kaalin intee le’eg buu kaga jiraa waxqabadka gobolka sanaag | Loveyes's Weblog
Ururka SEEYO waxa la aas aasay 17/4/2004, waxana lagu aas aasay shir ay soo qaban qaabisay wassaarada waxbarashada ee gobolka sanaag, ururka SEEYO oo loo soo gaabiyey kalmadahan afka qalaad lagu yidhaahdo(Somaliland Environmental Education Youth Organization) waxa uu kaga jiraa horumarka gobolka sanaag meel la taaban karo, ururka SEEYO waa urur dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo habloba.
ururka SEEYO waxaynu odhan karnaa waa urur ah voluntry oo u huraya ama u gubanaya danta reer sanaag iyo tan somalilanda.
waxyaabaha uu wax ka qabto waxa ka mid ah waxbarashada iyo deegaanka oo uu isbedel la taaban karo ka muujiyay intuu ka dhisnaa gobolka sanaag.
ururku wuxuu wadaa dugsi ay waxku bartaan dad gaadhaya ilaa 500 oo qof oo furan laga bilaabo 1:30 pm ilaa 9:00 pm oo ay wax ku bartaan arday isugu jirta wiilal iyo habloba, iyo weliba dadkii ka habsaamay waxbarashada ee ay ka soo dhex galeen dagaaladii ba’naa ee soo wajahay dalka.
xaga degaanka, ururku wuxuu dhir fara badan ku beeray dugsiga sare ee magaaalada ceerigaabo iyo meelo badan oo u badan dugsiyo, isagoo weliba ururku wado hado tababaro uu ka furay buuraha SURUD/DAALO,si kor loogu qaado wacyi gelinta degaanka waxana gacan ka siisay hayada Germanka ah ee (German Agro Action)loona soo gaabyo G/A/A.
waxba yaanan hadalka idinku daalin ururka SEEYO waa xidig u soo baxday gobolka sanaag iyo dhamaanba gobolada kale waxaanu ka codsanaynaa oo kaliya wallaalahayaga in ay nala garabgalaan hawsha aanu wadno, si aanu u sii wadno hawshaanu wadno.
waxa qorey soona diyaariyey.